Infochimps: Yako Big Data Platform Nyanzvi | Martech Zone
Infochimps: Yako Big Data Platform Nyanzvi
Chipiri, January 29, 2013 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Sesangano, vatengi vedu vari kutikumbira zvakanyanya uye nekuwedzera kuti tizive huwandu hwakawanda hwe data hwavari kupihwa kubva kumajini avo ekuzivisa - CRM, Email, Social Media, nezvimwe. Kusvika parizvino, isu takadhonza iyi data kuita data zvitoro pane yedu yemukati server, ndokuzvikwiza, uye tobva tatumira kunze kwenyika ruzivo rwataida.
Iyo data, zvakadaro, iri kuramba ichinetsa kusefa, chidimbu uye kugovera. Zvemagariro midhiya, semuenzaniso, zvinopa tambo uye ma URL eruzivo anofanirwa kuongororwa kuitira kuti inyatso kumakwa, kusarudzwa uye kutaurwa nezvayo. Uye hwindo renguva isu takabvunzwa kupaza kuburikidza iyi data iri kuita diki uye diki. Iyo vhoriyamu yedata iri kukura uye kukura - uye zvakanyanya kunetsa kubata. Vatengi vedu vanoda mhinduro… izvozvi.
Pinda hombe dhata mhinduro senge Infochimps. Infochimps vakatanga bhizinesi ravo nechinangwa chekugadzirisa zviuru zvemadhata neshuroto yekuve iyo 'wikipedia' yedata. Nekudaro, nekufamba kwenguva, vakaona kuti kukosha uye hunyanzvi hwavakanyatso kupa kwaive kuvaka chivakwa uye sevhisi inogona kubata dhata hombe nemazvo.
Kunyangwe iwe uri mutsva wekutanga uri kuputika mukukura uye kuvigwa mune data, kana kambani yebhizinesi inoda rubatsiro kuendesa mhinduro iyo inobatsira kuburitsa, kushandisa uye nekupa inoitika data, Infochimps inogona kubatsira. Rakawedzerwa bhenefiti kuchikuva sebasa? Ivo vatove neanopfuura zviuru gumi neshanu zvemadhata, uye ndeemumwe wevashoma Gip vanobatana vachipa iyo firehose yemagariro enhau data.
Kujairwa kwakazara neInfochimps ndiko kusanganisa kwe-dzimba mabasa ekuvaka kunze kwezvivakwa pamwe chete nemushandisi kuwana uye kugadzira maturusi. Infochimps yakasarudzika pakati pemahombe madhata mapuratifomu nekuda kwekuchinjika kwavo muhukuru hwekuendesa.
Infochimps Platform Kuongorora:
Zvivakwa Layer - Iwo ari pasi michina iyo inopa simba kuunganidzwa kwedata uye kusangana, chaiyo-nguva analytics, yakakura-mikuru batch analytics, uye kuchengetedza data.
Dhata Kuendesa Service ™ - DDS inosanganisirwa mushe pamwe neyako nharaunda nharaunda, inopa yakanyanya scalable ETL (kubvisa-shandura-mutoro) kugona, uye inogonesa chaiyo-nguva, kutenderera data analytics.
Data Management - Kunyangwe iri HBase, Cassandra, Elasticsearch, MongoDB, MySQL, kana vamwe, isu tinovimbisa iyo chaiyo yekuchengeta dhata rebasa racho nguva dzose iri pamunwe wako.
Cloud Hadoop - Ita hukuru hukuru batch ongororo sezvaunoda iwe, ingave ye-ad-hoc Hadoop masumbu kana anogara ari-pane ekugadzira mafashama ekubuda. Tsvaga zvese zvishandiso zvaunoda, pa - kudiwa kuyera uye kugadzirisa.
Application Layer - Mafaira ekuita kuti Big Data iwanikwe, kusanganisira yakagadziriswa analytics script yekushandisa, graphical dashboard, uye ine simba API.
wukong - inopa yakareruka analytics ruzivo rwekunyora. Nyora yako analytics mune yekuvandudza-inoshamwaridzika Ruby, mhanya kodhi yemuno kumhanyisa kukurumidza kutenderera, uye kuwedzera zviripo analytics zvinyorwa.
Dashpot ™ - Gadzira chaiyo nguva yekuratidzira kubva kune inoyerera dhata, uwane kudzika kuoneka mukati mePuratifomu masystem, uye nekukurumidza tanga nekumisa anoshanda mauniti mune ako data masumbu.
chikwiriro API - Iine API yakabatana, kudzora kwepuratifomu uye kuoneka kwedata mukati maro zvinongova zvishoma zvikumbiro zvewebhu kure. Parizvino mubeta.
Muenzaniso: Kambani hombe yenhau yakavaka pasocial media yekuteerera chikuva iyo inounganidza 18 kana so hova dze data rezvenhau. Rukova rwunowedzerwa neruzivo rwechikadzi, rwakaunganidzwa kupfupisa ruzivo, rwunotepfenyurwa kuenda kumatareti, rune manzwiro anoshandiswa, uye runoita zviziviso pazvinokumbirwa. Icho chinangwa chehurongwa ndechekupa vatengi vane chaiyo-nguva nhau. Vamwe vatengi vanosanganisira Cisco, NhemaLocus, Runa, Whaleshark Media, uye Bhuruu Cava.
Rongedza demo neInfochimps kana email info@infochimps.com nokuti zvimwe info.
Tags: APIbig datagore hadoopdashpotdata kuendesa sevhisiData managementhadoopinfochimpswukong
App Press: Iyo Mobile App Dhizaini yeVagadziri
Mira Kutaura Uye Teerera
Feb 7, 2013 at 8:51 PM
Kana ndisiri kukanganisa, infochimp imhando yesevhisi inogona kuteerera kune izvo vanhu vanoda zvakadai pasocial medai uye ipapo vatengi vanogona kuronga chinhu zvinoenderana? Ndingafarire webhusaiti yangu zvakare.
Kukadzi 7, 2013 na4:55 PM
Ndiyo imwe yedata masosi yavanogona kupa uye iwe unogona kuvaka sevhisi yekutarisa yakatenderedza iyo. Nekudaro, iro harisi bhizinesi ravo rekutanga.